NOSY CAYMAN: Fanavaozana ny COVID-19
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » NOSY CAYMAN: Fanavaozana ny COVID-19
Grand Cayman (GIS) - Nisy valiny ratsy valo notaterina nandritra ny fampahalalana ho an'ny mpanao gazety COVID-22 androany (2020 aprily 19).
Ny Lehiben'ny Governora dia nanambara fa misy sidina fanesorana bebe kokoa mankany Miami izay hatao ny zoma 1 mey ary nanazava fa ny resaka dia mitohy miaraka amin'ny governemanta isam-paritra efatra ka hatramin'ny dimy momba ny fampodiana an-tanindrazana.
Premier, Hon. Alden McLaughlin dia nanambara fa ny fivoriana manokana nataon'ny Antenimieram-pirenena androany dia nahafahana nanao fivoriana virtoaly lehibe rahampitso nankatoavin'ny Governora, rahampitso.
Ary farany, ny Minisitry ny fahasalamana dia nanamarika ny faha-dimampolo taonan'ny Andro eran-tany tamin'ny famintinana ireo hetsika natao hiadiana amin'ny fiovan'ny toetr'andro any amin'ny Nosy Cayman.
Valiny 8 ratsy no voalaza; Santionany 150 no eo am-pamolahana amin'izao fotoana izao amin'ny fotoana fanaovan-gazety ary 700 ny valiny mbola miandry. 80 amin'izy ireo no atao laharam-pahamehana, ao anatin'izany ny 50 eo ho eo izay tonga tamin'ny sidina British Airways sy ny manodidina ny 30 hafa noho ny antony ara-pitsaboana.
Ny isan'ny olona notaterina teo aloha gejala / asymptomatika dia mitoetra ihany, fa ireo izay efa nijaly dia mihatsara avokoa, ao anatin'izany ireo hopitaly.
Rahampitso amin'ny 2 ora tolakandro, ao anaty fandaharana voarakitra ao amin'ny fantsom-pahitalavitra Facebook sy Twitter an'ny governemanta, mpitsabo telo avy ao amin'ny HSA, Health City ary hopitaly dokotera no hiady hevitra sy hamaly ny fanontanian'ireo haino aman-jery momba ny COVID-19: ny fomba fampisehoany azy ary inona no hatao raha sendra misy afo. izy. Ny fivoriana dia halefa amin'ny CIGTV amin'ny 8 hariva hariva, aorian'ny fivorian'ny Antenimiera mpanao lalàna.
Tsy misy olana lehibe momba ny polisy mandritra ny alina ary ny heloka bevava dia mijanona ho marin-toerana.
Nisy fisakanana 21 tao Cayman Brac tao anatin'ny indray alina, ary fanitsakitsahana roa no voalaza fa samy nampandrenesina momba ny fampanoavana. Tamin'ny Grand Cayman nandritra ny alina dia fiara 231 no voasakana ary tsy nisy nahita ny vaky trano; nisesisesy ny mpandeha an-tongotra roa sy mpitaingina bisikileta iray no nosakanan'ny polisy ary nampitandremana izy ireo noho ny fanenjehana azy ireo.
Nanomboka tamin'ny 6 maraina androany dia olona telo no hita fa nandika ny lalànan'ny toeram-pialofana (ny iray nanao hetsika ara-barotra tsy nahazoana alalana ary ny roa nivoaka tamina fiara tsy nisy antony araka ny lalàna); izy telo dia nomena tapakila.
Mbola miteraka olana hatrany ny kamio malaky; lozam-pifamoivoizana goavana no niseho tany amin'ny distrika atsinanana io maraina io. Tombanana ho sitrana ny mpamily, saingy naratra mafy.
Ny hafainganana dia efa notaterina ihany koa tao amin'ny Spotts Newlands, West Bay ary amin'ny Esterley Tibbetts Highway. Ny Komisionera dia nangataka ny olona mba hiadana mba hamonjy ain'olona.
Ny mpandeha an-tongotra sy ny mpitondra môtô rehetra dia tokony hampiseho fahalalam-pomba eny amin'ny arabe, indrindra rehefa akaiky ny fiafaran'ny fe-potoana malefaka amin'ny takariva hariva mba hiarovana ny olona tsy manao fanatanjahantena.
Nisy ny fampahatsiahivana fa miverina amin'ny 7 hariva ka hatramin'ny 5 maraina rahampitso ny curfew henjana; ny fanatanjahan-tena dia avela mandritra ny 90 minitra eo anelanelan'ny 5.15 maraina ka hatramin'ny 6.45 hariva alatsinainy-asabotsy.; Ny torapasika dia mbola ao anaty hidy mafy mandra-pahatongan'ny zoma 1 Mey.
Ny RCIPS izao dia hanolotra fanavaozana isan-kerinandro / roa isam-bolana amin'ny torolàlana COVID-19. Nisaotra ny Lehiben'ny Governemanta, ny praiminisitra ary ny minisitra ny fahasalamana noho ny fitarihany nandritra io fotoana io; ny mihaino / mijery ny besinimaro noho ny fanohanany; vondrom-piarahamonina manerana ny Nosy noho ny faharetany sy ny fahatakarany; ny lehilahy sy ny vehivavy ao amin'ny RCIPS sy ny mpiara-miasa ao amin'ny CBC, ary koa ny constabulary manokana sy ny WORC izay miasa mandritra ny ora maro mba hitandroana ny filaminana any amin'ny Nosy Cayman.
Ny fizotry ny raharaha tao amin'ny Antenimiera mpanao lalàna dia nanitsy ny didim-pitsarana maharitra napetraky ny Governemanta, alohan'ny fankatoavan'ny Governora, hanaovana fivoriana virtoaly ao amin'ny Antenimiera mpanao lalàna. Ny voalohany dia hatao rahampitso ary halefa mivantana amin'ny CIGTV.
Ny fanitsiana ireto lalàna manaraka ireto dia hodinihina mandritra ity fivoriana ity, araka ny efa nambara teo aloha: ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana, ny lalàna momba ny fisotroan-dronono, ny lalàna mifehy ny fadin-tseranana ary ny lalàna mifehy ny asa.
Ho fanampin'izay dia hifidy ny House hanendry mpisolo toerana vaovao
Ireo olona nandao ny Nosy talohan'ny 1 febroary dia tsy manan-jo hisintona maika amin'ny volan'ny fisotroan-dronono ao anatin'ireo fanitsiana vaovao. Ireo olona izay mikasa ny hiala ny fahefana dia tsy maintsy mandamina ny fahazoana miditra amin'ny vola fisotroan-dronono alohan'ny hiaingany.
Ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety kasaina rahampitso dia tsy hisy satria ny LA dia hiatrika fivoriana. (Jereo ny teboka bala farany avy amin'i Dr Lee etsy ambony.)
Ny negatives valo sy ny fanitarana nitarina dia antony tokony hananana fanantenana, saingy ny vokatra dia tsy tokony andrasana raha tsy amin'ny zoma.
Ny isan'ny tranga ambany ao amin'ny Nosy Cayman, misy olona vitsivitsy any amin'ny hopitaly ary manao tatitra any amin'ny tobin'ny gripa, dia famantarana iray fa misy fepetra toy ny fanalavirana ny fiaraha-monina, ny fanidiana ny sisintany ary ny fitsapana mahery vaika, ny fanarahan-dia ary ny fitokanana.
I UK no lohalaharana amin'ny fampandrosoana vaksininy; misy vintana mety ho izy no mety ho firenena voalohany nanao vaksinina.
Ny sidina fialana hafa mankany Miami dia hatao ny zoma, 1 Mey amin'ny 10.30 ora sy sasany maraina. Ny tiket dia azo alefa mivantana miaraka amin'i Cayman Airways amin'ny 949-2311; hisokatra ny andalana manomboka amin'ny 9 maraina - 6 hariva ary hisokatra rahampitso ny famandrihana.
Ity sidina ity dia tsy hitondra olona avy any Miami satria efa afaka miasa ny quarantine raha vantany vao voaray ireo tonga avy any London.
Ho an'ireo mpandeha manantena ny handeha amin'ny tetezana fiaramanidina britanika faharoa, ny rohy mankany amin'ny boky dia www.otairbridge.com/trips/london-repatriation.
Ny sidina mankany London dia miainga ny alarobia 29 aprily amin'ny 6.05 hariva, tonga ao London Heathrow ny alakamisy 30 aprily amin'ny 11.35 maraina ary nijanona kely tao amin'ny Nosy Turks sy Caicos mba hanangonana mpandeha izay niverina tany Londres.
Azafady miantso ny biraon'ny governora amin'ny 244-2407 raha te-hivezivezy amin'ity sidina ity ianao miaraka amin'ny biby fiompy.
Ireo mpandeha izay miverina avy any Londres mankany Cayman, dia hifandray amin'ny Office London, miaraka amin'ireo mpandeha laharam-pahamehana izay hiresahana amin'ny tranche voalohany, hanome ny famandrihana sidina sy ny antsipirian'ny fandoavana. Hifandray aminao anio na rahampitso ianao raha mbola tsy nifandray.
Ny sidina fandosirana fanampiny dia voalamina ho laharam-pahamehana indrindra; mitohy ny resaka amin'ny governemanta efatra ka hatramin'ny dimy farafahakeliny.
Nisaotra an'i Brasserie tamin'ny fanomezana sakafo atoandro isan'andro ho an'ny mpiasan'ny Fahasalamam-bahoaka izy, ary naneho ihany koa ny fankasitrahany ireo mpiasan'ny CIAA sy ireo mpiara-miasa amin'izy ireo nandritra ity fotoana ity. Nampatsiahiviny ihany koa ny besinimaro fa misokatra ho an'ny orinasa an-tserasera ny Lands and Survey.
Niantso tamin'ny banky izy mikasika ny fandaminana ny fidirana amin'ny anaran'ny mpanjifa avy any East End, North Side ary Bodden Town ary hanome fepetra arakaraka ny toetr'andro ratsy.
Nankalaza ny faha-50 taonan'ny Andron'ny Tany izy, izay an-tapitrisany no nanatevin-daharana hiaro ny tontolo manodidina sy manerantany ary ny fiovan'ny toetrandro kosa no fanamby lehibe indrindra amin'ny ho avin'ny zanak'olombelona.
Nisaotra ireo vondrona avy amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina toa ny DOE, DEH, National Trust, Botanic Park, Plastika Free Cayman ary ny Antenimieran'ny varotra noho ny ezaka nataon'izy ireo tamin'ity toerana ity.
Nanambara izy fa hanomboka indray ny fanodinana ireo rehefa vita ny olan'ny mpamokatra ary naverina tamin'ny laoniny ny herinaratra. Ny DEH dia mbola nanangona fanodinana azo ampiasaina kosa raha tsy nisy vetivety ny fanodinana.
SAINT LUCIA: Famerenana 100 isan-jato amin'ny tranga COVID-19
Nanambara ny fandrarana ny lamba firakofana an-dranomasina sy an-dranomasina i Indonezia